I-Ultrasonic Spraying, Nebulizing, ne-Atomizing - Hielscher Ultrasound Technology
Ukudlidliza kwe-Ultrasonic kungadala amaconsi amancane kakhulu. Phakathi nokupompela kwe-ultrasonic, usayizi we-droplet nokusatshalaliswa kungalawulwa ngokuqondile ukuze amaconsi amancane kanye nezinhlayiyana zingashiswa. Ngaleyo ndlela, izinhlayiya ezinezindawo eziphezulu zikhiqizwa. I-spy ultrasonic kanye ne-atomization ubuchwepheshe obuphumelelayo isib ukusebenzisa izembatho ezincane zokusebenza okuphezulu kanye nekhwalithi ku-substrate. Ngenxa yokulawulwa kwe-acurate phezu kwayo yonke imigomo yenqubo ye-atomization ye-ultrasonic, ukunqwabelana kwe-overspraying kungagwenywa futhi ukwabiwa okucacile kwe-droplet kufinyelelwe. Esinye isicelo esingaba khona kakhulu yi-ultrasonic spray eyomile noma yokuqandisa.
I-ultrasonic spraying technique yenziwa emagatsheni ahlukahlukene yezimboni ngezicelo eziningi. Izinsimu ezivame kakhulu ze-nebulizing ye-ultrasonic kanye ne-atomization yizona zokumboza okuncane-zefilimu kanye nokwehla okufutho noma ukufiphaza ukuqandisa kwama-particle.
Njengendlela yokuvotela esebenza ngokuzimboni, ukuchithwa kwe-ultrasonic kusetshenziswe ngempumelelo emigqeni yokukhiqiza yokusebenza okuphezulu okugqoke ifilimu encane ngesikhathi sokukhiqiza kwenqubo ecacile yama-electronic njengama-semiconductors, amadivaysi okucacisa, izicelo ze-nanotechnology, amaseli kagesi, namaseli alanga.
Embonini yokudla, ukuchithwa kwe-ultrasonic kusetshenziselwa ukugqugquzela ukukhishwa kwe-spray ye-powders, isib. Ikhofi, ubisi, whey kanye namanye ama-powders.
i-film-thin film for electronics
ukugqoka okuphezulu (isib. aqukethe i-functional nano izinhlayiya)
ukumboza okubhekene nobunkungu
engeza umswakama kumfudlana kagesi
i-encapsulation yama agent asebenzayo ku Imithi
spray drying of powders kanye granules, isb ama-nano-izinhlayiya
imboni yokudla: ubisi & whey powder, ikhofi esheshayo
spray drying of powders yokudla, isib. imikhiqizo ethintekayo ekushiseni
ekwenzeni ama-semiconductors, ama-fuel cell, imishini yezokwelapha
amakhemikhali: isib gas-liquid ukusabela, ukubopha
Izinzuzo zokumiswa kwe-ultrasonic:
akukho ukulimala kokushisa
akukho izithasiselo ezidingekayo
ukuhlala isikhathi eside
isisindo esinciphile somkhiqizo
akukho noma ushintsho oluncane kunambitha
akukho ukulahlekelwa kwezakhi
I-ultrasonic Sonotrode S26d18S ye-Atomization, i-Nebulizing noma i-Spraying
ukugeleza okuguquguqukayo / izinga lokufiphaza
Ama-vibrations e-Ultrasonic akhiqizwa yi-Hielscher ultrasonicator UP200St nge-spray sonotrode S26d18S asetshenziswa ukufafaza futhi nge-nebulize amaconsi asayizi amancane.
I-Hielscher Ultrasonics Nebulizing / Spraying usebenzisa i-UP200St
I-Hielscher Ultrasonics ingumhlinzeki wakho ophezulu we-atomizer ye-ultrasonic kanye ne-spraying nozzles. Sinikeza izixazululo ezimisiwe nezenziwe ngezifiso zomphumela wenqubo efanele.
Thintana nathi namhlanje ukuze ufunde ukuthi ukuchithwa kwe-ultrasonic kanye ne-atomization kungayithuthukisa kanjani inqubo yakho!
Izinhlelo ze-ultrasonic spray, ezibizwa nangokuthi i-atomizers ye-ultrasonic noma ama-nozzle e-ultrasonic, adala ukuphakama okuphezulu futhi ngaleyo ndlela akwazi ukukhiqiza ama-droplets amahle kakhulu, eyaziwa nangokuthi “inkungu eyomile”. Izinzuzo ze-atomization ye-ultrasonic yiwona olawula ngokugcwele usayizi we-droplet, ukuphalaza ngamandla kanye ne-droplet velocity. I-atomizer ye-industrial ultrasonic, engakwazi ukufakwa kalula ngaphakathi emigqeni yokukhiqiza esekhona, vumela ukuphuma okuphezulu ekuphumeni kwekhwalithi eqinile.
I-Ultrasonic spray drying iyindlela ephumelelayo kakhulu neyenobumnene evumela ukuthi kube nemiphumela emihle. Ngenxa yobumnene bayo, kusebenza kakhulu ezintweni ezithinta ukushisa. Ngaphezu kwalokho, ikhuthaza umthamo wokucubungula njengoba kuholela ekukhuphukeni okusheshayo kweziphuzo ezidakayo kanye nama-solvents.